Zuva reNyika muhumambo hutsva hweSaudi Arabia huchajeka muNyika Yekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Zuva reNyika muhumambo hutsva hweSaudi Arabia huchajeka muNyika Yekushanya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
Iye Anokudzwa, Gurukota reSaudi rezveKushanya, VaAhmed Aqeel AlKhateeb, anga asiri kungotamba naHE Edmund Bartlett, Gurukota rezveKushanya muJamaica. Ari kutamba pasi rese yekutamba.
Nyika iri kutarisa kuRiadh rubatsiro, uye rubatsiro rwuri munzira.
Saudi Arabia yanga ichisimuka panguva yedenda nenzira dzakawanda.
Zuva ranhasi reNational Day rinogona kunge riri zvakare National National Day reSaudi Arabia nenyika ichiona.
Saudi Arabia National Day inogara ichipembererwa pa Nyamavhuvhu 23rd.
Inozivikanwa munharaunda seAl-Yaom-ul-Watany, inoratidza 23 Gunyana 1932, apo Mambo Abdulaziz vakazivisa kubatana kwenyika sehumambo.
Humambo hweSaudi Arabia yakavambwa mu1932 naMambo Abdulaziz (anozivikanwa saIbn Saud kuMadokero).
Kana chero munhu akabvunzwa mazuva ano nezve Saudi Arabia, pfungwa nezve mafambiro uye kushanya zvakaenzana nepfungwa dzemafuta nehupfumi.
Izvi zvaive zvakasiyana zvakanyanya kare apo humambo hwaingovhurwa kushanya kwechitendero kana bhizinesi.
Kubva "hapana kushanya", Saudi Arabia yakachinjira kune "zvese nezve kushanya" nhasi.
Saudi Arabia haina kungoita inonyanya kukosha mutambi wedunhu muchikamu chekufamba asi, pasina mubvunzo, mumwe wevatambi vepasirese akakosha.
Kubata mahofisi ematunhu akaita seUNWTO, WTTC, nyika iri kushandisa mabhiriyoni emadhora kwete kungonunura chikamu chayo chete asi kubatsira nyika.
Iyo Saudi Inofarira Boka ne World Tourism Network pasi pehutungamiriri hwe HRH Dr Abdulaziz Bin Naser Al Saud naRaed Habbis ine pane inonyanya kushanda WhatsApp Kukurukurirana Boka parizvino inoonekwa kuWTN.
Saudi Arabia yaitarisira kuve imba nyowani yeWorld Tourism Organisation (UNWTO). Kuve neUNWTO inotungamirwa muhumambo kwaizosimbisa chinzvimbo chepasirese semutungamiri wepasi rose wekushanya kuSaudi Arabia.
Apo a Saudi Crown Prince uye weSpanish PM taura zvinogona kuve zvakakosha kune UNWTO bhizinesi kumisa kuda kwakadaro nehumambo. UNWTO inotungamirwa muSpain, ichipa Humambo hweSpain chinzvimbo chepasirese mukushanya, uye chigaro chechigarire muUNWTO Executive Council.
Zvinoita sekutaurirana maererano nekudzivirira kufamba neSaudi Arabia yekupa UNWTO imba nyowani iri kuenderera mberi.
Europe, America, kana China vari kutya kuti Saudi Arabia inokwira kwavaiwanzokundikana, asi zvinounza tariro muAfrica, Asia, kunyangwe muCaribbean nedzimwe nzvimbo.
Gurukota rezvekushanya muJamaica Edmund Bartlett akafara kwazvo neSaudi Arabia, izvo Anokudzwa VaAhmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia vakaonekwa vachitamba naEdmund Bartlett, Gurukota rezveKushanya muJamaica munyika yaBob Marley.
Anokudzwa VaAhmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia vachitamba naEdmund Bartlett, Gurukota Rezvekushanya kuJamaica
Kumisikidzwa kwepasirese kwekushanya kwepasirese kuri kunyatso shanduka, uye zvinogona kusuduruka zvakanyanya kuenda kuSaudi Arabia.
Hakuna imwe nyika pasi rose yakaratidza chiratidzo chakadai chepasirese cheichi chikamu munguva yakapfuura. Kune zvinopfuura kuona, kune mari, yakawanda mari.
Kana Saudi Arabia ikaonekwa mumusangano, mukukurukurirana, inova ndiyo yekutarisa yemusangano kana hurukuro.
KuWTTC Sumit muCancun muna Chivabvu kuoneka kweMutungamiri weSaudi kwakakonzera kuti CEO weWTTC Gloria Guevara asiye basa rake kuWTTC. Iye zvino ndiye chipangamazano wepamusoro wegurukota AlKhateeb, anogara muRiyadh, uye achipemberera Saudi National Day nhasi semugari weMexico.
Zvinotaridzika kuenda pamwe nemufananidzo weimwe nyika yakavhurika yakagadzirira kutanga ramangwana rakajeka kana zvasvika pakupfumisa mufananidzo wayo pamusika wepasi rose.
Nhasi uno humambo hunopemberera zororo reNyika - uye zvirokwazvo iri zvakare zororo rakakosha kwazvo kubazi rekushanya nekushanya kwese kwese.
Saudi Arabia yakabatanidza matunhu mana kuita nyika imwechete kuburikidza nekukunda kwakateedzana kutanga muna 1902 nekutapwa kwaRiyadh, imba yemadzitateguru emhuri yake, Imba yeSaud.
Gore rega rega, Gunyana 23 mukana wevagari veSaudi kupemberera yavo yetsika nhaka uye kutarisa kune ramangwana. Munguva yemafaro ezuva renyika, migwagwa mukati menyika ino yakazara nevhu uye chena-mavara emureza weSaudi anoratidzwa mumifananidzo yeDoodle. Zvizvarwa zvemunyika zvinogona kuonekwa zvakashongedzwa muaya mavara ekufananidzira uye zvichiratidza mureza wenyika pamotokari nedzimba dzevanhu.
Kumba kune kwaakaberekerwa chiIslam uye parizvino ichiita shanduko diki yemagariro uye hupfumi, Humambo hweSaudi Arabia hunopemberera zuva rayo rekuzvarwa rechi91 pazuva September 23. Chirevo chegore rino reSaudi National Day ndere "Imba Yedu".
Saudi National Day inopembererwa pamwe kutamba kwevanhu, nziyo, uye mabiko echinyakare. Migwagwa nezvivakwa zvakashongedzwa nemireza yeSaudi, uye vanhu vanopfeka iwo marudzi eruvara rwegirinhi uye chena, uye vanoratidza mabhaluni zvakafanana.
Saudi Arabia, zviri pamutemo Humambo hweSaudi Arabia, inyika iri kuWestern Asia. Inotambanudza huwandu hwakawanda hweArabian Peninsula, ine nzvimbo yepasi ingangoita 2,150,000 km². Saudi Arabia ndiyo nyika yakakura kwazvo kuMiddle East, uye nyika yechipiri pakukura munyika yeArabhu.
Tourism inoonekwa seyazvino chiono chekukura kutsva.
Bazi rezveKushanya rakazivisa kuti Humambo hwakavhura mikova yavo kuvashanyi vekunze uye kubvisa kusimiswa kwekupinda kwevashanyi vhiza kutanga kubva Nyamavhuvhu 1, 2021
Humambo huri kuisa mari mukushanya nenzira hombe. Iye munhu anotsigira chiono chekushanyirwa igurukota rine huchokwadi hwepasi rose, Anokudzwa VaAhmed Aqeel AlKhateeb.
Ndiye Gurukota rezveKushanya kuSaudi Arabia. Ane makore anopfuura makumi maviri neshanu ezviitiko mune yekudyara uye emari masevhisi, panguva iyo yaakagadza, kubata, uye kugadzirisa patsva huwandu hwevamiriri vehurumende nemakambani. Iye anozivikanwa nekugona kwake kutungamira shanduko yesangano uye kuzadzisa zviono zvenguva yemberi zvakanaka uye zvinobudirira.
Parizvino, akabata zvinzvimbo
Sachigaro weBhodi revatungamiriri veSaudi Tourism Authority.
Sachigaro weBhodi revatungamiriri veiyo Tourism Development Fund.
Sachigaro weKomiti yeHupenyu hweHupenyu Chirongwa
Sachigaro weBhodi revatungamiriri weSaudi Fund yeKubudirira
Sachigaro weBhodi revatungamiriri veSaudi Arabia Mauto Maindasitiri (SAMI).
Secretary General uye Nhengo yeBhodi revatungamiriri kana Diriyah Gate Development Authority
Secretary General uye Mutevedzeri Sachigaro weBhodi revatungamiriri veNew Jeddah Downtown
Nhengo yeBhodi revatungamiriri vePublic Investment Fund.
Nhengo yeBhodi revatungamiriri veGeneral Organisation yeMasoja Maindasitiri.
Nhengo yeKanzuru Yezvehupfumi uye Zvekuvandudza Nyaya.
Nhengo yeBhodi revatungamiriri veNeom Kambani.
Nhengo yeBhodi reVatungamiriri veRed Sea Sea Kambani.
Nhengo yeBhodi revatungamiriri ve Iyo National Development Fund.
Kuisa mari munharaunda yekushanya ndiyo imwe yeshongwe dzeSaudi Vision 2030 uye humbowo hwekushingirira kuenda kumberi kuti uone zvishuwo uye zvinangwa.
Kuisa mari muchikamu kunobatsira kugadzira mikana yekudyara inobatsira vatengesi vemuno nevekunze.
Isu hatifunge nezvekushanya semutyairi chete wekukura kwehupfumi, asi zvakare sezambuko rekutaurirana kwetsika nenyika, izvo zvinogona kusimudzira nhanho yekunzwisisa uye kuremekedza pamwe.
Tourism ndiyo imwe yezvikamu zvinokurumidza kukura pasirese. Mumakore masere apfuura, chikamu chekushanya chakawedzera muvhareji inodarika avhareji yepasirese.
Sekureva kwenhamba dzakaitwa neWorld Travel uye Tourism Council, chikamu ichi chinopa zvikamu gumi kubva muzana zvepasi rose zvigadzirwa (GDP).
Gore rapfuura, huwandu hwekukura kwevashanyi hwakamira pa3.9 muzana, nepo hupfumi hwepasi rose hwakawana 3.2 muzana.
Zvinotarisirwa kuti chikamu chekushanyirwa chikure ne3.7 muzana panosvika 2029, zvinova zvinopa mari inodarika mabhiriyoni gumi nematatu emadhora muhupfumi hwepasi rose zvakaenzana nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana zveGDP yenyika.
Chikamu chezvekushanya chinotsigira 319 mamirioni emabasa pasirese - inova imwe yemabasa gumi pagumi pasirese - uye iri basa rekugadzira basa rimwe chete kubva kune yega yega mabasa mashanu akapihwa mumakore mashanu apfuura.
Padanho repasi rose, chikamu chekushanya chinoonekwa seicho chakazara kuburikidza nekutora chikamu chikuru chevechidiki nevakadzi zvichienzaniswa nevashandi vese.
Basa riri kuenderera mberi kuvandudza zvivakwa zvikuru nemasevhisi muhumambo nechinangwa chekusangana nekuwedzera kuri kudiwa nenzira inoenderana nezano rekushanya muhumambo:
- Anosvika 150,000 emakamuri ehotera achavakwa mumakore matatu anotevera. 70 muzana yeaya mahotera achaitwa neakazvimiririra.
- Humambo, pamwe nekubatana nevatengesi vemuno nevekunze uye mari yemuno yekudyara, kusanganisira yeVashanyi Yekuvandudza Fund, iri kutsvaga kumisikidza 500,000 makamuri emahotera muHumambo na2030.
- Memoranda dzinoverengeka dzekunzwisisa dzine huwandu hwakapfuura 115 bhiriyoni dzeSaudi riyals dzakasainwa kuvandudza zvivakwa uye kuwedzera huwandu hwemakamuri emahotera aripo.
- Humambo hunotsvaga kuwedzera kugona kwekubata kwendege dzehumambo nevanopfuura mamirioni zana vafambi pagore.
Parizvino zvinhu zvakatarisana neSaudi Arabia:
Kuderera kwehupfumi kwakakonzerwa nedenda kwakakanganisa chikamu chevashanyi, kunyanya chikamu chevabatsiri uye mahotera.
Kuderera kwevatakuri nemamiriyoni makumi maviri nematanhatu.
Kune mazana maviri ezviuru emabasa akange akanganiswa muchikamu.
Humambo hwapa matanho ekutsigira hupfumi nemamiriyoni zana nemakumi maviri emabhiza eSaudi.
Saudis muchikamu akabatsirwa nechirongwa chekutsigira mihoro nehurumende.
Humambo hwatanga danho rekutsigira iyo Saudis mihoro kumasangano akazvimirira ane huwandu hwakazara wemabhiriyoni gumi nemana Saudi riyals. Rutsigiro urwu rwakanangisawo chikamu chekushanya.
Mukana wakapihwa kuburikidza nechirongwa cheAjeer kuchinjana mabhenefiti pakati pezvivakwa kudzora kukanganisa.
Mari dzakanangana nekushanya nemaguta dzakadonhedzwa.
Mahotera akagashira vanopfuura zviuru makumi mashanu zvevagari vakadzokera kuhumambo kuburikidza nehurongwa "kudzoka kwemugari", uko kwavakagashirwa mumakamuri emahotera anopfuura zviuru gumi nezvitatu kwenguva inotambanuka pakati pevhiki kusvika kumavhiki maviri.
Nechinangwa chekusimudzira kushanya kwemuno, humambo hwakatangisa mwaka weSaudi weZhizha unofukidza nzvimbo gumi dzevashanyi nyika yese.
Iyo Yekushanya Strategic muhumambo
Humambo hwakatendera hurongwa hwenyika hwekushanya, hwakaratidza mitsara mikuru yekushuvira chikamu chinoenderana nezvinangwa zveSaudi Vision:
Tine tarisiro yekuwedzera mupiro wevashanyi chikamu muiyo GDP kubva padanho razvino re3 muzana kusvika pamusoro pegumi muzana muzana na10.
Chikamu chezvekushanya chakanangana nekugadzira mamwe mamirioni emabasa kuti asvike mamirioni 1.6 emabasa munzvimbo yekushanya panosvika 2030.
Isu tinonanga kukwezva mamirioni zana kushanya kwemuno nekune dzimwe nyika gore rega na100.
Iyo Yevashanyi Visa
Humambo hwakatangisa vhiza yekushanya munaGunyana 2019, uko vagari venyika makumi mana nenomwe vanogona kugamuchira vhiza pamagetsi, nepo varidzi veUS, UK uye Schengen visa vanogona kugamuchira vhiza pavanosvika, uye vanotongwa nedzimwe nyika vanogona kunyorera kuti vawane vhiza kuburikidza nekushanya vamiririri veUmambo munyika dzavo.
Nyika makumi mana nepfumbamwe dzinosvika makumi masere muzana muzana emashandisirwo evashanyi pasirese uye dzinogashira dzakatenderedza makumi manomwe neshanu muzana muzana yevanotsvaga nzendo dzakanaka dzevashanyi munyika.
Iyo Yevashanyi Investment Fud
Ndezvipi zvinangwa zvekumisikidza homwe yeVashanyi Yekudyara?
-Kuumba iyo Yekushanya Investment Fund inovavarira kukurudzira kudyara kwevashanyi muhumambo, kusiyanisa zviwanikwa zvemari, kuwedzera mupiro webazi rezvekushanya muGDP, uye kugadzira mamwe mabasa evanhurume nevanhukadzi veSaudi mubazi rezvekushanya, pamwe nekupa rubatsiro mukugamuchira vatashanyi vakawanda muHumambo zvinoenderana nezvinangwa zvehurongwa hwenyika hwekushanya uye iyo Saudi Vision 2030.
• Ndezvipi zvishandiso izvo homwe ichashandisa kutsigira uye kukwezva zviwanikwa zvevashanyi?- Iyo Yevashanyi Investment Fund yakagadzwa ine capital yemabhiriyoni gumi nemashanu eSaudi riyals. Homwe iyi yakasainawo memoranda yekunzwanana nemabhangi emuno kubhadharira mapurojekiti evashanyi ane angangoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emamiriyoni eSaudi.
Homwe iyi, mukudyidzana nemabhangi ekudyara, yakavamba mari yekuisa mari munzvimbo dzakasiyana siyana dzevashanyi.
• Ndeipi mikana yekudyara inopihwa nehomwe?
- Imwe yedzinonyanya kukosha zvibodzwa zvehomwe iyi kutsigira uye kukurudzira mari dzekushanya muHumambo.
Mupfungwa iyi, homwe yacho inovhura kudyidzana nevashambadzi zvakananga kuburikidza nekuvatsigira mune chero chinhu chine chekuita nemapurojekiti evashanyi ayo anogona kutungamira mukuvandudza chikamu chekushanya munzvimbo dzakasiyana dzehumambo, kusanganisira nzvimbo dzakasiyana, senge mahotera, maresitorendi uye kusimudzira nzvimbo dzevashanyi, kugamuchira vaeni zvakajairika uye varongi verwendo.
Homwe iyi inotsvagawo kuita nharaunda yekudyara kuti ive inokwezva kune vega uye nekupa rutsigiro rwayo kuti iwane zvirongwa zvinobatsira, izvo zvinoumba mikana mikuru yekudyara muHumambo kuburikidza nekugadzirisa nzvimbo yevashanyi nenzira inoenderana nehurongwa hwenyika hwekushanya.
Zvakare, iyo mari inonakidzwa nebasa rakakura mukuvandudza indasitiri yekushanya mune zvese uye kukurudzira zvimwe
Varume veSaudi nevakadzi kuti vapinde muchikamu ichi nedanho rekupa miriyoni mitsva yemabasa na2030, pamusoro pekuwedzera mupiro wedanho rekushanya muhumambo kusvika kugumi muzana muzana na10 kukwira kubva pamwero wazvino we2030 muzana, uye kuronga kugamuchira mamirioni zana ekushanya kwevashanyi.
Ndedzipi mhinduro dzemari dzinopihwa nehomwe?
- Iyo homwe inotsigira yakazvimirira chikamu kuburikidza nekupa zvikwereti zvekudyara, pamwe nekudyara muzvirongwa kuburikidza nekuva nemasheya muzvirongwa izvi. Iyo homwe inopawo vimbiso kune mamwe mapurojekiti.
- Rutsigiro rwunopihwawo mune dzimwe nguva kune akakurumbira uye mapiyona mapurojekiti kuburikidza nekupa mhinduro dzese dzambotaurwa. Homwe iyi, mukubatana pamwe nevemumiriri ehurumende, inobatsira mukupa nzvimbo dzezvimwe zvirongwa zvakakosha uye zvakakosha.
Tourism Development Fund Webhusaiti